नेपालगन्जमा प्रधानमन्त्रीको अपमान: यसरी पोखे कार्याकर्ताले आक्रोश - samayapost.com
नेपालगन्जमा प्रधानमन्त्रीको अपमान: यसरी पोखे कार्याकर्ताले आक्रोश
समयपोष्ट २०७४ कार्तिक २९ गते २:५५
आधा खुला भएको भुइँतलाको सानो हलमा खचाखच कार्यकर्ता भरिएका थिए कांग्रेस बाँकेको पार्टी कार्यालयमा । सुरक्षाकर्मीलाई भीड मिलाउन हम्मेहम्मे थियो । पार्टी जिल्लासचिव कपिल शर्माले कार्यक्रम सुरु गरे । कार्यकर्तालाई जिज्ञासा राख्न भने । मञ्चमा बसेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला सभापति किरण कोइरालासँग कानमा खुसुक्क भन्दै थिए, ‘केको जिज्ञासा छ र ? ऐले ढिला हुन्छ ? ’ कोइरालाले राख्न दिऊँ भन्ने इशारा गरिन् ।
कोइराला टाउको हल्लाइरहेकी थिइन्
आफैंभित्र झगडा नगरौं: देउवा
गजेन्द्र बोहरा /अन्नपूर्ण पोस्टबाट